Ababoneleli bePanty beSisu kunye neFektri- Abavelisi bePanty baseTshayina
Abasetyhini abancinci be-sexy esinqeni sokulawula okuphezulu baphembelele phezulu kwiipanties baphathe iibhuthi eziphathwayo
I-leggings engatyibiliki kunye nebhulukhwe yokuqinisa umzimba. I-Lace jacquard, i-sexy kunye nenhle. Uyilo olunemilinganiselo emithathu ye-hip, amanqatha e-hip asongelweyo, yonyusa okhalweni. Ilaphu eliphakamileyo lokuphefumla linciphisa ngokufanelekileyo i-belly fat, slim kunye nomtsalane, lithambile kwaye linokuphefumla ngaphandle komkhondo.
Imizimba yabasetyhini engenamthungo iQhosha leMidlalo elibhinqileyo Iibhanti eziphakamileyo ezinamaqhina aphakamileyo olawulo lweSystem Tummy Panty Mid-Thigh Body Shaper
Le milo yeengubo zenkangeleko yintsimbi ephezulu esinqeni elineendwangu ezibambe kabini ukujikeleza kwendlela yecala lasesitalatweni ukunceda ukuthambisa isisu sakho, ukunciphisa isinqe sakho kunye nokuncancisa isisu sakho ngokucinezeleka okulingeneyo, sikunike ukujonga okuthe tye kunye nokuthamba ngokukhawuleza.
Abasetyhini beThuthi yoLawulo lweMithi yokuShunqulwa kwamalungu omzimba
Ihlobo kunye neebhulukhwe zesisu ezomeleleyo zesisu esisehlobo kunye nentwasahlobo, isisu esingaphambili senziwe ngesongelo lobuso obuphakamileyo, esinokubumba isisu esiethe-ethe. Ilaphu elenzelwe ukuphefumla lokuphefumla linokuphefumla kwaye alikho sultry. Ikotoni engaphakathi yokugada, ithambile kwaye ikhuselekile. I-cuffs ezigqunywe ngokuthambileyo, ayiqinanga.
Amaphepha aphakamileyo oMgangatho ophezulu wokuPhathwa kweTummy Underwear engenamthungo yokuLolonga umzimba ngePanty I-Btter kunye neShawara yoQeqeshiso lwaBaqeqeshi
I-Butt Lifter Tummy control Shapers, Womens Underwear .Women Seamless Slimming Sharinging Panty. I-Butt Lifter ene-Shistwear ye-Waist yoqeqesho. Unobumba wesiNgesi kunye noyilo lwe-mesh luhlobo lwefashoni kunye ne-sexy.Shape umzobo wakho omkhulu.